Ihe ọmụmụ 3D nke obodo - Ọpụrụiche na ọrụ obodo - Geofumadas
AulaGEO na -ewepụta usoro ọmụmụ anọ a na -akpọ "Autocad Civil4D maka nyocha na ọrụ obodo" nke ga -enyere gị aka ịmụta ka esi ejikwa ngwanrọ Autodesk a mara mma ma tinye ya n'ọrụ na saịtị dị iche iche. Bụrụ ọkachamara na ngwanrọ a, ị ga -enwe ike iwepụta ọrụ ụwa, gbakọọ ihe na ọnụ ahịa ihe owuwu ma mepụta atụmatụ dị mma nke okporo ụzọ, àkwà mmiri, ọwa mmiri n'etiti ndị ọzọ.
Ọ bụ ngwaahịa nke awa nraranye, ọrụ na mbọ, na -anakọta data kachasị mkpa na isiokwu Civil and Topographic Engineering, na -achịkọta nnukwu echiche na ime ka ha baa uru, ka ị nwee ike mụta ihe n'ụzọ dị mfe na n'ụzọ dị mfe. Ngwa ngwa na klaasị akọwapụtara nke ọma ma jiri data na ezigbo ihe atụ anyị na-enye ebe a mee ihe. Ọ bụrụ na ịchọrọ ịmalite ijikwa ngwanrọ a, isonye na nkuzi a ga -azọpụta gị izu nke ọrụ nyocha n'onwe gị ihe anyị nyochara, mee nnwale ndị anyị mere, na imehie ihe ndị anyị meburu.
Mgbe ị na -enyocha n'ọhịa, ị nwere ike ibubata isi ala ndị a n'ime Civil3D ma chekwaa oge dị ukwuu na ịse ihe.
Mepụta elu ala n'akụkụ 2 na 3 wee mepụta mgbako dịka mpaghara, olu na mmegharị ụwa
Rụpụta nhazi kwụ ọtọ na kwụ ọtọ nke na -enye ohere imebe ọrụ ahịrị dịka okporo ụzọ, ọwa mmiri, àkwà mmiri, ụzọ ụgbọ oloko, ahịrị dị elu, n'etiti ndị ọzọ.
Kwadebe atụmatụ ọkachamara iji gosipụta ọrụ ma na atụmatụ yana na profaịlụ.
Kọmputa nwere mkpa diski ike, RAM (opekata mpe 2 GB) yana onye nrụpụta Intel, AMD
Ezigbo ihe ọmụma nke Topography, Civil ma ọ bụ metụtara.
AutoCAD Civil 3D software ụdị ọ bụla
Ezubere nkuzi a maka onye ọ bụla chọrọ ịmụta ka esi eji sọftụwia a.
Ndị na -ahụ maka teknụzụ, ndị na -ahụ maka teknụzụ ma ọ bụ ndị ọkachamara na nyocha, ndị nkịtị ma ọ bụ ndị metụtara chọrọ ịkwalite nrụpụta na nka ha na ngwanrọ a.
Onye ọ bụla chọrọ ịmụta ka esi arụ ọrụ ahịrị na nyocha ọrụ.
Previous Post«Previous Usoro ArcGIS Pro - efu ka elu na ArcPy
Next Post Exceldị Excel - aghụghọ dị elu na CAD - GIS na MacrosNext »